Man United iyo Real Madrid oo ku heshiiyey saxiixa Raphael Varane… (Goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa u dhaqaaqistiisa Old Trafford?) – Gool FM
Haaruun July 26, 2021
(Manchester) 26 Luulyo 2021. Sida ay sheegayaan warkii ugu dambeeyey ee haatan soo baxaya Kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ayaa ku heshiiyey saxiixa Raphael Varane, waxaana lagu wadaa in saxiixa daafacan u dhaqaaqistiisa Old Trafford lagu dhawaaqo dhammaadka todobaadkan.
Manchester United ayaa kalsooni weyn ku qabta in xiddiga Kooxda Real Madrid ee Raphael Varane uu kooxdeeda ka mid noqon doono dhammaadka isbuucaan.
Daafacan dhexe ayaa ku soo laabtay horraantii bishaan Tababarka isudiyaarinta xilli ciyaareedka ee Los Blancos, laakiin 12 sanadood ayaa kaga harsan qandaraaskiisa haatan, iyadoo uu aad ugu dhow yahay inuu ka mid noqdo kooxda reer England ee Man United.
Majaladda Faransiiska ee Le Parisian ayaa warinaysa in la isla meel dhigay saxiixa daafacaan, isla markaana ay Man United ku qaadan karto Varane adduun dhan 39 milyan oo gini, kaasoo qibrad u leh tartanka Champions League, sidoo kalena xulkiisa Faransiiska kula guuleystay Koobkii Adduunka ee 2018-kii.
Wadahadallada ayaa lagu soo warramayaa inay si dhaqso leh ugu socdeen Man United iyo Real Madrid, ilaa heer uu Varane noqon karo ciyaaryahan Man United ah isbuuca soo socda.